Nin dilay dad ka badan 100-Qof oo ka sheekeeyay Dhacdooyin argagax leh | Arrimaha Bulshada
Home News Nin dilay dad ka badan 100-Qof oo ka sheekeeyay Dhacdooyin argagax leh
Nin dilay dad ka badan 100-Qof oo ka sheekeeyay Dhacdooyin argagax leh
Sunday, May 06, 2018 News
Bulsha:- Dalka Suuriya waxaa ka jira dagaallo muddo toddobo sano socday oo lagu hoobtay. Dowladda madaxweyne Bashar Al Asad ayaa dagaal kula jirta kooxaha mucaaradka iyo kooxo kale oo maleeshiyaad ah. Magaalada waqooyiga ku taalla ee Raqqa waxay ka mid ahayd goobaha sida wayn loogu dagaalamay. Halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa, dhacdada nin ka mid dibadbaxyaasha ka soo horjeeday dowladda oo isu baddalay inuu noqdo qof dadka laaya.
Lix nin ayaa lagu amray inay tegaan garoon ku yaallo magaalada xalab ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, halkaasoo uu tababare Faransiis ah uu bixinayay tababar la xiriira sida dadka loogu dilo bastoolad, hub iyo gantaalba.
Wuxuu sheegay khaalid ” in dilalka inta badan lagu fulin jiray mooto, waxaad u baahantahay inaad qaadato mooto uu qof kale kuu wado si aad u toogasho u fulisid”
Intii uu xabsiga ku jiray wuxuu sheegay in mid ka mid ah ilaalada uu jirdil ku sameeyay isaga, laguna khasbay inuu jilbaha u dhigto sawirka madaxweyne Assad.
Wuxuu askarigaasi igu oran jiray ” waxaan rabaa inaad geeriyooto oo ay gacantaydu sabab kuu noqoto”
Waxaan xasuusiyay waxyaabihii ii ugu oran jiray marka aan xabsiga ku jiray oo ay ka mid ahayd.